China ultrasonic nano CBD uwoyela emulsification umshini Ukwakha kanye nefektri | Precision Hangzhou
I-CBD njengezithako ezisebenzayo emithini, kufanele ihlakazeke ibe ama-nanoparticles ukuze ingene kahle futhi idlale indima yayo kwezokwelapha.CBD iyi-hydrophobic, ngakho-ke kufanele ihlakazeke ibe yisixazululo samanzi ngeshear enamandla amakhulu. Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kubhekwa njengeyona ndlela ephumelela kunazo zonke yokwenza i-CBD emulsions ngenxa yezinhlobo zayo eziningi zesisombululo nomphumela ozinzile we-emulsification.
Ukuze ulungiselele ama-cannabinoid nanoemulsions, inani elifanele le-CBD kufanele lithelwe ku-glycerin, uwoyela kakhukhunathi, noma uketshezi oluxubekile lwamanzi namafutha. Icutshungulwa yimishini ye-ultrasonic emulsification kuze kube yilapho isisombululo sesiguqukile noma sisobala. Imvamisa, i-CBD esifundazweni esiguqukayo ihlakazekile ngaphansi kwe-100 nm, kanti i-CBD esesweni esobala ihlakazeke ngaphansi kwama-60 nm. I-emulsion eguquguqukayo noma esobala ephethwe yi-ultrasound ingagcina unomphela isimo esizimele ngaphandle kwesidingo sokwengeza ama-emulsifiers amaningi noma ama-surfactants. Ucwaningo lukhombisile ukuthi ku-nanoemulsion ngemuva kokwelashwa kwe-ultrasonic, ukusetshenziswa kwe-CBD kungakhuphuka ngama-6 kuye kuma-10 times, kepha le datha idinga ukuhlolwa okwengeziwe ukuqinisekisa.
1. Sineminyaka engaphezu kwengu-3 yesipiliyoni ekusetshenzisweni kukawoyela we-CBD. Ukuthengisa kwangaphambilini singakunika iziphakamiso eziningi zobuchwepheshe ukuqinisekisa ukuthi ungathenga imikhiqizo efaneleke kakhulu.
2.Imishini yethu inekhwalithi ezinzile nomphumela omuhle wokucubungula.
3. Sineqembu elikhuluma isiNgisi ngemuva kokuthengisa. Ngemuva kokuthola umkhiqizo, uzoba nokufakwa kobuchwepheshe futhi usebenzise ividiyo yokufundisa.
4. Sinikeza iwaranti yeminyaka emi-2, uma kunezinkinga zemishini, sizophendula kungakapheli amahora angama-48 ngemuva kokuthola impendulo. Ngesikhathi sewaranti, izingxenye zokulungisa nokuzifaka esikhundleni sinye mahhala. Ngaphandle kwesikhathi sewaranti, sikhokhisa kuphela izindleko zezingxenye ezahlukahlukene nokulondolozwa kwamahhala kwempilo.
Langaphambilini Isisetshenziswa se-Ultrasonic liquid processing
Olandelayo: Idivayisi ye-Ultrasonic emulsifying yokucubungula i-biodiesel
Umshini Wokumisa uwoyela we-Nano Ultrasonic Cbd
Ultrasonic Emulsification Emulsifying Ukwenza Umshini
Izinsiza kusebenza ze-Ultrasonic Emulsification
Umshini wokusabalalisa we-Ultrasonic Material Emulsification